कहिले सुइँको पाउने महादेवहरुले सतिदेवी गन्हाएको ? — News of The World
कहिले सुइँको पाउने महादेवहरुले सतिदेवी गन्हाएको ?
पुष्पलाल पाण्डेआश्विन २४, २०७५
सतिदेवीको मृत्युले मर्माहत भएका महादेवले उनको शव बोकेर दुनियाँ भ्रमण गरे । यता महादेवले सतिदेवीको मृत शरिर बोकिरहेका छन । उता सतिदेवीको शरिर नस्ट हुँदै गईरहेकोछ । तर महादेव भने निरन्तर आफ्नी प्राण प्यारीको शव बोकेर भौतरि रहेकाछन । यो सवस्थानीमा पढेको सत्ययूगको कथा हो । महादेवका नयाँ रुप कलियूगमा पनि प्रसस्तै देख्न पाईन्छन । महादेवको यो नयाँ रुपमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत भएकोछ । अधिनायक वाद रुपि सतिदेवी बोकेर अहिले काँग्रेस महादेव झैं बिरक्त यात्रमा निस्किएकोछ । अहिले अधिनायकवाद रुपि सतिदेवीको शरिर नस्ट भएर हो की बिरक्तिएका महादेव गलेर हो कांग्रेस सुस्ताएकोछ । उहिलै सत्य यूगमा सतिदेवीको अंग पतन भएको ठाउँमा शिव लिंगको उत्पत्ति भई शिव गणहरुलेपुजा गर्दथे । अहिले कांग्रेसले बोकेकी सतिदेवी कहाँ पतन भईन कांग्रेसलाई पनि थाहा भएन । न त कांग्रेसगणले नै अनुष्ठान र पूजा गर्ने मेसो नै पाए । अर्थात अधिनायकवाद रुपि सतिदेवी कांग्रेस रुपि महादेवका लागि कुनै कोण्बाट पनि लाभकारी बन्न सकेन । त्यसैले होला कांग्रेसका बडा देखि छोटा नेता कसैको मुखबाट पनि अधिनायकवादको उच्चारण नभएको धेरै भयो ।
अहिले वातावरणवादीहरुको नाममा नयाँमहादेवले अवतार लिएका छन । यी महादेवहरुले निजगढ बिमानस्थलमा काटीने भनिएका २४ लाख रुख रुपि सतिदेवी बोकेर हिड्ने प्रयत्न गरेका छन । उतिबेला देवादिदेब महादेव सतिदेवीको मृत्युले शोकाकुल थिए । शोकमा परेका महादेवले अवचेतन रुप मै सतिदेवीको शरिर बोकेर हिंडेका थिए । यसकारण सतिदेवीको शरिर पतन भएको ज्ञान समेत उनलाई भएन । तर कलि यूगका महादेवहरु सतिदेवीलाई चेतन मन सहित बोकेर हिंडिरहेका छन । सत खर्ब रुपैंयाँ लागतको निजगढ बिमास्थल नेपालको तराई क्षेत्रको समृद्धिको ढोका खोल्ने आधार संरचना हो । कलियूगका महादेबहरु सकेसम्म यो ढोका बन्द गराउन लागिपरेका छन । रुखलाई सतिदेवी बनाएर पिठ्युँमा बोकेका यी नयाँ महादेबहरुले देखाउन त रुखको शोक देखाएका छन तर उनीहरुको वास्तविक शोक भन्ने अन्यत्रै छ । बिरगञ्ज निजगढलाई पुरै विश्वसँग जोड्ने यो परियोजना बन्न नदिन दक्षिणी छिमेकीको प्रस्ट चासो छ । यहि चासोलाई हाम्रा वातावरणबादी महादेबहरुले सतिदेवी रुपि रुखको रोइलो गाइरहेका छन । प्रसिद्ध गजलकार मजरुह सुलतानको लोकप्रिय गजल कहिंपर निगाहें, कहिंपर निसाने शैलिमा कलियुगका महादेवहरुले निजगढ बिमास्थलको विरोध गरिरहेका छन ।
भारतीय वायूसेनाको गोरखपुर वेसक्याम्पबाट १५१ कि.मि. टाढा रहेको निजगढ बिमास्थल बन्नु भारतीय वायूसेनाका लागि निको विषय नहुनु पचाउन सकिने ईस्यु बन्ला तर नेपालीहरुको तर्फबाट यसको विरोध हुनु पचाउन सकिने विषय पटक्कै होईन । भारतीय संस्थापन जसरी हुन्छ आफ्नो वायूसेनालाई एयर ट्राफिक गर्ने यो बिमानस्थल नबनोस भन्ने चाहान्छ । यसैकारण नेपाली महादेवहरुलाई रुख रुपि सतिदेवीको भारि बोकाएर नजर र निगाहेंको अन्तर देखाउन भारत तलिलन छ ।
अधिनायकवाद रुपि सतिदेवीको पतनको पत्तो नभए जसरी निजगढका रुख रुपि सतिदेवीको पनि पतन निश्चित छ । अधिनायकवाद रुपि सतिदेवीको भन्दा निगढरुपि सतिदेवीको प्रभाव अलि लामो समयसम्म रहन सक्छ । किनभने यी सतिदेवीलाई बोक्न र शिबलिंङग ठड्याउन धेरै शिवगण लागि परेका छन । दक्षिणका शिवगणलाई शक्ति दिन युरोप तिरबाट आउने शिवगणहरुले प्रसस्तै प्रार्थाना गर्ने पक्का छ । वातावरण रुपि महादेवले बोकेको निजगढ रुपि सतिदेवीको जहाँ जहाँ अंग पतन हुँदैन । जान्छ त्यहाँ त्यहाँ यी शिवगणहरुले शिवलिङ बनाउने प्रयास अबस्य गर्नेछन । ती शिव लिङ्गको ज्योतिर्मय सफलता नगरिक उड्यायन मन्त्रालयले लिने निती, गति, मति, र सरस्वतीमा भरपर्ने पक्का छ ।
महादेवका नयाँ रुपको अवतार पनि अजिवको छ । कांग्रेसले छोडेको अधिनायक रुपि सतिदेवीको भारी अहिले केहि बौद्धिक र ठूला भनिने मिडियाका सम्पादकहरुले बोक्न थालेका छन । कुनै जमाना थियो नेपोलियन बोनापार्ट जस्ता शासक लाखौं सेनासँग भन्दा केहि पत्रिकासँग डराउँथे । थोमस जेफर्सन जस्ता दार्शनिकहरु मिडिया बिनाको देश भन्दा देश बिनाको मिडिया खोज्दथे । किनभने उनीहरुको नजरमा मिडियामा नैतिकता थियो । अहिले मिडिया नैतिकता बिनाको आलोचक बन्दै गएको छ । मिडिया आलोचक बन्नु प्रजातन्त्रको सुन्दरता हो । तर अन्धालोचना प्रजातन्त्रका लागि विष समान मानिन्छ । यस्तै विष छर्ने काम अहिले केहि ठूला मिडियाले गरि रहेका छन ।
समृद्धिका सपनालाई तमासा भन्दै ढ्याङ्ग्रो ठोकेर जनताको मस्तिस्कमा सिंगो सरकार र वामपन्थी शक्तिलाई नकारात्मक रुपमा भर्ने प्रयत्न भैरहेको छ । यो तप्का देशमा बाटो बन्नु रेल गुड्नु र पानी जहाज चल्नुलाई संमृद्धि देख्दैन । सतिसाललाई यहि बर्ष हुर्किएको नर्कटले होचो देखेर उल्याए जस्तै यो तप्काले सरकारका दिर्घकलिन नीति र योजनालाई उल्याईरहेको छ । गजबको छ यो तप्का घरभित्र बसेर टिभी हेर्दै गरेका अनिस शाक्यलाई गोलि ठोकेर मार्ने तत्कालिन सत्तामा प्रजातन्त्र देख्छ । माले, मसाले र मण्डले एकैहुन भनेर किलोसेरा सन्चालन गर्ने र प्रत्येक जिल्लाका सिडियोहरुलाई कम्युनिस्ट देखे मार्ने, पक्रने र मुद्दा चलाउन फर्मा जारी गर्ने त्यो सत्तामा प्रजातन्त्रको दियो धपधपि बलेको ठान्छ ।
देशमा आतंक मच्चाउने, विप्लवका कार्यकर्तालाई सरकारले ठेगान लगाउन खोज्दा थर, गोत्र र लक्ष समेत नमिल्नेहरुले मानव अधिकारको लेप लगाएर रंगाइरहेका छन । यहाँ पनि मानव अधिकारको रुपधारण गरेका महादेवहरुले आतंक रुपि सतिदेवी बोकेर हिंडिरहेका छन । थाहा छैन, यी महादेवहरुले कहिले ती सतिदेवी गन्हाएको सुईँको पाउने हुन् ।